25 Sano, Suuqa Caalamka
Sannadkii 1996-kii, YUFA waxay bilaabeen inay adeegsadaan astaanta "YUSHEN", waxay had iyo jeer qaadataa tayo sare sida heerka, waxay soo saartay noocyo kala duwan oo ah budo alumina ah oo leh cilmi baaris iyo horumarin xirfadeed. Ka dib 25 sano oo horumar iyo maarayn ah, "YUSHEN" wax soo saarka sumadda ayaa si wanaagsan loogu iibiyaa in ka badan 40 dal oo adduunka ah. Waxay heshay xuquuqda soo dejinta iyo dhoofinta Shiinaha sanadkii 1999, waxayna noqotay shirkad caan ah oo ka soo baxda gobolka Aasiya iyo Baasifigga, sidoo kale waxay sumcad gaar ah ku leedahay suuqyada caalamiga ah sida Japan, Koonfurta Kuuriya, Jarmalka, iwm.
Astaanta Tayada, Hubinta Tayada
Si loo hubiyo tayada, Kooxda YUFA waxay aqbashay 6m foornada dhexroor weyn oo loogu talagalay 24h dhalaal joogto ah. Marna ma dabcinayso heerarka waqtiga iyo xakamaynta heer kulka dhalashada, waxay ku adkeysaneysaa soo saarista alaab tayo sare leh, waxayna ku guuleysataa aqoonsiga suuqa tartanka tayada wax soo saarka oo deggan.
Dadka aan haysan, dadka ayaynu ka fiicanahay
Nooca "YUSEHN" "sodiumka yar, soodhiyamka soodhka ah, cufnaanta badan" iyo noocyada kale ee alaabooyinka wax lagu nadiifiyo ee corundum cad ayaa si aad ah loo xaqiijiyay suuqa, waxayna soo saari karaan qalab gaar ah oo khaas ah oo loo yaqaan 'corundum white abrasives' sida ku cad baahida macaamiisha. Laga soo bilaabo 2008, "YUSHEN" calaamadeynta corundum abrasives cad (F4-F220, P12-P220) iyo budada cad ee alumina (F230-F1200, P240-P2500) ayaa si isdaba joog ah loogu qiimeeyay inay yihiin "alaab caan ku ah warshadaha abrasives-ka Shiinaha".